Hay'ada laanqayrta cas - Wikipedia
Hay'ada laanqayrta cas
Hay'ada laanqayrta cas (af-ingiriiska : International Red Cross and Red Crescent Movement).
Ururka Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas iyo Bisha Cas ayaa ah dhaqdhaqaaq caalami ah oo bani'aadamnimo ah oo leh qiyaastii 17 milyan oo mutadawiciin ah, xubno iyo shaqaale caalami ah oo loo aasaasay si loo ilaaliyo nolosha bini'aadamka iyo caafimaadka, si loo hubiyo ixtiraamka dhammaanba bini'aadamka, iyo in laga hortago loona yareeyo bini'aadamka dhibaatada.
Dhaqdhaqaaqa wuxuu ka kooban yahay ururro kala duwan oo sharci ahaan ka madax banaan midba midka kale, laakiin waxay ku midoobaan dhaqdhaqaaqa aasaasiga ah, mabaadii'da, calaamadaha, qawaaniinta iyo ururrada maamulka. Qeybaha dhaqdhaqaaqa waa: Guddiga Caalamiga ah ee Ururka Laanqeyrta Cas (ICRC) waa hay'ad bani'aadamnimo oo gaar ah oo la aasaasay 1863kii Geneva, Switzerland, gaar ahaan Henry Dunant iyo Gustave Moynier. Gudigeeda 25-ka xubnood waxay leedahay awood gaar ah sharciga sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada si loo ilaaliyo nolosha iyo sharafta dhibanayaasha colaadaha caalamiga ah iyo kan gudaha. ICRC waxay heshay abaalmarinta Nobel Peace Prize saddex jeer (1917, 1944 iyo 1963).
Ururka Caalamiga ah ee Ururka Laanqeyrta Cas iyo Ururka Bisha Cas (IFRC) waxaa la aasaasay 1919kii, waxaana maanta la isku duwaa hawlaha ka dhexeeyo 190 Laanqayrta Cas ee Qaranka iyo Bulshada Bisha Cas ee Dhaqdhaqaaqa. Heer heer caalami ah, Ururka Federaalku wuxuu hogaaminayaa oo qabanqaabiyaa, iyadoo lala kaashanayo Jaaliyadaha Qaranka, howlaha gargaarka gargaarka ee ka jawaabaya xaaladaha degdegga ah ee ballaadhan. Xogheynta Caalamiga ah ee Xiriirka Caalamiga waxay ku saleysan tahay Geneva, Switzerland. Sanadkii 1963, Ururka Federaalka (oo loo yaqaan 'League of Red Society Societies') ayaa la siiyay abaalmarinta Nobel Peace Prize ICRC. Ururka Laanqayrta Cas iyo Bulshada Bisha Cas waxay ka jiraan wax kasta oo adduunka ah. Hadda waxaa jira 190 Urur Bulsho oo ay aqoonsanayaan ICRC waxayna qirtay xubno buuxa oo Federaal ah. Hay'ad kastaa waxay ka shaqeysaa waddankeeda iyadoo loo eegayo mabaadiida sharciga caalamiga ee xuquuqda dadka iyo xeerarka dhaqdhaqaaqa caalamiga ah. Iyada oo ku xiran duruufahooda gaarka ah iyo kartida, Ururada Qaran waxay qaadan karaan hawlo dheeri ah oo dheeraad ah oo aan si toos ah loogu qeexin sharciga caalamiga ee bani'aadamnimada ama mandaqadda dhaqdhaqaaqa caalamiga ah. Dalal badan, waxaa si adag loola xiriiriyaa nidaamka daryeelka caafimaad ee
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Hay%27ada_laanqayrta_cas&oldid=222078"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Oktoobar 2021, marka ee eheed 20:00.